Hidden ဥရောပခုနှစ်တွင်ကျောက်မျက်ရတနာပြီးတော့ဘယ်လိုရထားအားဖြင့်ရှိပါတယ် Get ရန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > Hidden ဥရောပခုနှစ်တွင်ကျောက်မျက်ရတနာပြီးတော့ဘယ်လိုရထားအားဖြင့်ရှိပါတယ် Get ရန်
အားလုံးခရီးသွားဧည့်ဥရောပ၌ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်အဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ဥရောပလိုမြို့ကြီးပြသွားရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အိပ်မက်မက်. သူတို့ထဲကတစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံပျော်ရွှင်စွာ Eiffel Tower အနားမှာရပ်နေတယ်, Colosseum သို့မဟုတ် Big Ben ကလူတိုင်းကိုခြွင်းချက်ခံစားရစေသည် (ကျနော်တို့လုံးဝကြောင်းအရ!). သင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိ Instagram ကိုစှဲလမျးသူ ဒါမှမဟုတ် "စစ်မှန်သော" ခရီးသွား, ကမ္ဘာတဝှမ်းသောအရပ်တို့ကိုမယ့်အရာအားလုံးဖြစ်ပါသည်!
ပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်, မသိသောရှာဖွေစူးစမ်း, အသစ်သောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖို့ကြိုးစားနေ, နှင့်လှပကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုတွေ့ကြုံခံစား. အစစ်အမှန်ခရီးသွားများအတွက်မဟုတ်ဒါကြောင့်ဖွင့် ကွောကျသော လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားဦး. သူတို့ဟာမကြာခဏလေဆိပ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးများနှင့်အများအပြားလာရောက်လည်ပတ်သူဆွဲကြဘူးသောမြို့များအားဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့ကြိုက်တယ်. ဥရောပတိုက်တွင်ဤအဝှကျထားကျောက်မျက်အလွန်မကြာခဏအရာအားလုံးထက်ထက်အထူးသဖြင့်ဥရောပနိုင်ငံပိုကောင်းတဲ့ရုပ်ပုံကိုပေးနိုင်ပါသည်, လူမြိုးတစျမြိုး၏စစ်မှန်သောနားလည်မှု. ရထားကသူတို့ကိုလာရောက်လည်ပတ် ဖြစ်ကောင်းသစ်ကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် ရှုခင်းများ အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းလျှောက်. သင်တစ်ဦးခရီးသွားရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဤစာရင်းတွင်သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်.
ဤတွင်ဥရောပ၌အကြှနျုပျတို့၏အကြိုက်ဆုံးက hidden ကျောက်မျက်အလွယ်တကူများမှာ ရထားလက်လှမ်းမှီ ကိုမြင်လျှင်တန်ဖိုးရှိတစ်ဦးသံသယမရှိ.
မှတ်စု: သင်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် ရထားမသွားသာရှိပြီးပြည်ပမှဘတ်စ်ကားအားဖြင့်သွား – ရွေးချယ်မှုအမြဲရထားဖြစ်သင့်.
1. Saxony, သဘာဝနှင့်သမိုင်းတို့၏အမျိုးစုံရသည့်ရောနှောခြင်းနှင့်ဥရောပတွင် Hidden Gems ကိုရွေးချယ်ခြင်း
ချက်ချင်းစိတ်ပိုင်း Dresden မှကိုယ့်ကိုကိုယ်ပရောဂျက်ရန်မလိုအပ်, အမှန်. Dresden ဖြစ် Saxony ၏မြို့တော်, ဒါပေမယ့်ဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်ဤအရှေ့ပိုင်းဂျာမန်ဒေသအချို့ကိုအခြားအစိတ်အပိုင်းများရှိနေပါတယ်, လွန်း. Dresden မှအဆိုပါ Konigstein ခံတပ်ဖြစ်ပါတယ်ရုံအပြင်ဘက်. တဖန်သင်တို့လမ်းလျှောက်ပျော်မွေ့လျှင်, သင် Saxony အတွက် stonework တံတားများလက်လွတ်မသငျ့သညျ အမျိုးသားဥယျာဉ်. ထို့အပွငျ, သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူရိုးသားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဒါဟာရန်ခက်ခဲသည် ဂျာမဏီသို့သွားရောက် နှင့်, အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်, တိုများလွန်းမဟုတ် ဘီယာ တံခါးကျင်အချို့အတွက်. ကံကောင်းတာက, Saxony မကောင်းပါ Schandau ဟုခေါ်သောအသေးစား spa မြို့ရှိပါတယ်, ယစ်မူးညဥ့်ပြီးနောက် detoxing အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော. အဲဒါကိုနေရာဖြစ်သည်ကတည်းက Gluhwein လည်းသင့်ရဲ့စာရင်းကိုအပေါ်ဖြစ်သင့် ဂျာမနီမှာအသက်အကြီးဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်. အဆိုပါ ဂျာမန်ရထားကွန်ယက်ကို သငျသညျက၎င်း၏လေးရယ်ကြောင့်တွေ့ကြုံခံစားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီဒေသမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်.
Frankfurt Dresden မှရထား
လူဇင်ဘတ် Dresden မှရထား
အမ်စတာဒမ် Dresden မှရထား
2. လူဇင်ဘတ်စီးတီး, တစ်ဦး Tiny, ရိုမန်းတစ် Capital ကို
သငျသညျလူဇင်ဘတ်အကြောင်းပြောနေတာသည့်အခါစဉ်းစားပထမဦးဆုံးအရာဘဏ်များဖြစ်ပါသည်. တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစွာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲကအတိအကျလူသိများသည်. ဒါပေမယ့်ဘတ်ရဲ့ steepled ဘုရား, ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်အိမ်များ, နှင့်အသေးစားတူးမြောင်းများကသင်မျှော်လင့်ထားချင်ပါတယ်ထက်ပိုပြီးပျော်စရာစေပါ. ဤအရပ်ဌာနကိုဒီတိုက်ကြီးရဲ့မြို့တော်တို့တွင်အဥရောပအတွက်ရှားပါးဝှက်ထားသောကျောက်မျက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဒါကြောင့်ဖွင့်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် လှပသောရာအရပျ, ဘယ်မှာ Petrusse နှင့် Alzette မြစ်များတွေ့ကြံအမှတ်မှာထားကြ၏. သင်ကစားသောက်ဆိုင်အချို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး တင်ပါးဆုံရိုးဘား ဗဟိုစတုရန်းအနီး. ထို့အပြင်, , rue Philippe II ကိုစျေးဆိုင်တစည်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ပိုကောင်းအနည်းငယ်နှစ်ကောင်သုံးဖြုန်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်! စုပေါင်း. လူဇင်ဘတ် တစ်ဦးတစ်စုံလင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော တနင်္ဂနွေ.
3. Antwerp: စိန်ပွင့်, စက်ဘီး ဘီယာနှင့်အပို
နောက်တစ်ကြိမ်လောက်, မရကယ့်ကိုတစ်ဦးက hidden ကျောက်မျက်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဖော်ပြရတယ်. အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ရိုးရှင်း. Antwerp သင့်ရဲ့အပေါ်အားဖြင့်ရပ်တန့်ရန်နေရာကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ် ရထားခရီးစဉ် လူဇင်ဘတ်ကနေနယ်သာလန်မှ. အပြင်, ဤမြို့ကိုကမ်းလှမ်းမှုကိုမှအများကြီးရှိပါတယ်, သငျတို့သအဲဒီမှာပျော်စရာရှိသင့်. သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် စက်ဘီးစီးခြင်းအကြောင်းကိုအသည်းအသန် နှင့်ဗိသုကာပညာကိုသင်ယူရှိသည် "ဗိသုကာခရီးစဉ်။ " ဒီအေးမြမြေပုံကျေးဇူးတင်ပါသည်, သင်လုပ်နိုင်သည် မြို့ပျေါလှငျရှာဖွေတွေ့ရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်အကြိုက်ဆုံးပုံစံပေါ်တွင်. သငျသညျအရာတစ်ခုခုပိုနှစ်သက်လျှင် "shinier", စိန်၏ Antwerp မူလစာမျက်နှာထုတ်စစ်ဆေးသွားပါ. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ဘယ်လ်ဂျီယံဘီယာချစ်သူများအဘို့သည်ကြီး. သငျသညျတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ပေးအပ်, "De Konick" မှာတစ်ခွက်ဖမ်းပြီး, အဆိုပါ Antwerp မြို့ဘီယာ.
4. Camogli, ဥရောပအတွက်စစ်မှန်သော Hidden ကျောက်မျက်ရတနာ
သာ 45 ရထားစီး၏မိနစ်ကွာထံမှ ဂျီနိုအာ, ဒီသေးငယ်တဲ့ငါးဖမ်းသမားမြို့-ရှုမြင်မဖြစ်မနေအများကြီးရှိသည်ပါဘူး. သို့သျောလညျး, သူကဲ့သို့များများစားစား တစ်ဦးderrated သောနေရာများ ဥရောပ၏စစ်မှန်သောဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ဖြစ်ထွက်လှည့်, ဒီတစ်ခုလည်းသင့်ရဲ့စာရင်းကိုအပေါ်ဖြစ်သင့်. ယင်း၏ရောင်စုံအိမ်များနှင့်မတ်စောက်သောလမ်းများနှင့်အတူ, Camogli ရှည်လမ်းလျှောက်သွားကြဖို့တစ်စုံလင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. Camogli မှတဆင့် Walking, သငျသညျဖန်စီဟိုတယ်များသတိထားမိပါလိမ့်မယ်, အဟောင်းအဆောက်အဦးများ, အငယ် Bakeries. သင်ကသိကြခင်မှာ – သငျသညျဤအရပျနဲ့မေတ္တာလဲကြပါလိမ့်မယ်! တဖန်သင်တို့လှည့်ပတ်လမ်းလျှောက်ငြီးငွေ့လာတဲ့အခါ, မြို့ရဲ့စားသောက်ဆိုင်အချို့အတွက်နေ့လယ်စာရှိခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ရာမရှိ. Camogli သွားရောက်တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောအချိန်မေလပါလိမ့်မယ်, ငါးစဉ်အတွင်း ပွဲတော်. ဤဖြစ်ရပ်၏အဓိကဆွဲဆောင်မှု 28-တစ်တန်ဒယ်အိုးဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကိုအသုံးပြုသည်, သင်မှန်ကမှန်းဆ, ငါးချက်ပြုတ်ဘို့.
ရထား Camogli မှ Florence
ရထား Camogli မှဂျီနိုအာ
ရထား Camogli မှရောမမြို့
ရထား Camogli မှမီလန်
5. Weymouth, အင်္ဂလန်ရှိသဲသောင်ပြင်မြို့တစ်မြို့သည်ဥရောပရှိ Hidden Gems ၏စာရင်းကိုပိတ်လိုက်သည်
သင်အနီးဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများလာသောအခါ၎င်းသည်ဥရောပထဲမှာ hidden ကျောက်မျက်များ၏တဦးတည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ခက်ခဲသည်. Yup, သင်မှန်ဖတ်. ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း Weymouth ၏ Jurassic ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်. သေး, များသောလူ 3-နာရီကိုယူရန်ဆုံးဖြတ် ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကနေရထားစီး သူတို့ကိုကြည့်ရှုရန်. လုပျသူမြားကိုကွဲပြားခြားနားသောခံစားနိုငျ ရေ နှင့်ကမ်းခြေပေါ်ငါးနှင့်ချစ်ပ်များ. ဒါမှမဟုတ်ဂတ်စ်တိုဘားအချို့မှာမုန့်ညက်မှုအတွက်ရွေးချယ်. အဆိုပါပေါင်အနည်းငယ်ဆင်းယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက, အင်္ဂလန်မှတစ်ဦးခရီးစဉ်တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အချိန်က. Weymouth သို့အလည်အပတ်သွားရန်အချိန်ကောင်းသည် Weymouth တွင်သြဂုတ်လဖြစ်သည် ပျြောပှဲသဘငျ.
သင်၏လာမည့်စွန့်စားခန်းများသို့မည်သည့်နေရာတွင်လာရောက်လည်ပတ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီခဲ့ပါသလား? ကောင်းသော! ငါးပါးသောနေရာများနေဆဲဥရောပတှငျအခြို့စူးစမျးရှာဖှေရေးမပွုရသေးသောနဲ့ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်များမှာမည်မျှရှိရုံဥပမာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. လောကီသားတို့သည်သင်တို့သူတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စောင့်ဆိုင်းအံ့သြဖွယ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏. မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြ သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောထောင့်ကနေအဲဒီနေရာတွေမှာကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်. လည်း, သင်ပိုမိုသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်. သင်လိုအပ်ခဲ့လျှင် သင့်ရဲ့ခရီးစီစဉ်ကူညီ, သို့မဟုတ်သင်လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ချင်, မှာကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး SaveATrain.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#Camogli #တေးရေး #Saxony #သီဟ antwerp europetrains europetravel လူဇင်ဘတ် မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ